Nnukwu akwa akwa akwa maka akwa China Manufacturer
Guangzhou New Magnetics Technology Co.,Ltd [Guangdong,China] Ụdị ahịa:Distributor/Wholesaler , Manufacturer , Trade Company Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide Onye na-emepụta ihe:11% - 20% N'ezie:ISO9001, RoHS, Test Report Nkọwa:Ihe ngbasi,Nnukwu akwa Chalkboards,Nnukwu kọlọ maka mgbidi
Home > Ngwaahịa > Igwe eji magnetik anabata ihe > Onwe ihe nrapado nke ogwe > Nnukwu akwa akwa akwa maka akwa
Nnukwu akwa akwa akwa maka akwa
Ngwaahịa anyị Nkebi No.BCKP-NS50-PSA, nnukwu chalkboard maka mgbidi, bụ ụdị akwụkwọ ndochi na- agbanwe agbanwe . Nnukwu nha maka mgbidi, mkpụbelata mfe, gbagọrọ agbagọ, kpudo ihu, ma ọ bụ nwee ike ịbanye n'ụdị ọ bụla. EN71 na ROHS kwekọrọ, adịghị enwe nkuku ma ọ bụ akụkụ dị ike ma dị nkọ ma ọ gaghị akpata mmerụ ahụ ma ọ bụ mmerụ ahụ ma ọ nweghị nchebe. Ruru anyị Self nrapado Whiteboard mpempe akwụkwọ siri ike nyagide, na Starry film mfe iji wụnye na agaghị ada oyi mfe. Dịka bọọdụ ojii, ọ nwere nnukwu ihe odide na nhichapụ nhichapụ, dakọtara maka ọtụtụ mkpịsị edemede, akara nwere ike ihichapu n’ime otu ọnwa. Ka Magnetik ọkọbọde Whiteboard mpempe akwụkwọ mere site agwakọta ígwè powder na plastic (CPE wdg), ọ nwere magburu onwe magnetik anabata ikike, attachable nju.
Mpempe akwụkwọ ọcha. Dakọtara maka ọkọlọtọ bọọdụ bekee kpọrọ nkụ, chalk, erasable.
Emere site na ịgwakọta ntụ ntụ na plastik (CPE wdg). O nwere ikike ikike ndọta dị mma, ihe ndọta.
Enweghị demagnetized, mgbochi nchara.
Ejiri nrapado siri ike mee, bọọdụ na-acha ọcha agaghị ada ada n'ụzọ dị mfe, ọ dị mkpa ịmị olulu na gị mgbidi ma nwee ike iwunye ọ bụla dị larịị dị ka desktọpụ, kabinet na ndị ọzọ.
PP kachasị mma, ezigbo ihu igwe na-eguzogide, dị mma maka iji ime ụlọ na-adịgide adịgide, enwere nnukwu nha.
Oge Rewritable Bara Uru: Oge 20000 (nke a na-eji igwe na-ede ihe na-acha ọcha bọọdụ n'okpuru ọnọdụ okpomọkụ na iru mmiri)
Mkpochapu nhichapụ: Maka mkpịpị akara bọọdụ ndị nkịtị, akara nwere ike ihichapu n’ime otu ọnwa. Ọ bụrụ na akara ndị a na-ahapụ na bọọdụ ọcha ruo ogologo oge, ọ gaghị ehichakwa, biko jiri Whiteboard Cleaner ma ọ bụ ụfọdụ mmiri mmiri na-egbu egbu iji wepu ha.
More banyere onwe nrapado Whiteboard
More banyere Wepụ Adhesive Whiteboard
More banyere Adhesive-azụ Magnet Mat
New Magnetik Teknụzụ Co., Ltd (Victor Yang)
Tele : + 86-020-83480977 / 83480978/83480979/83480980
Faksị: + 86-020-83480976
Tinye: 3 Ala, Xinglong Building, No.1, Shidaigang Middle, Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong, China
Office Staff Note Board Idea For Company
Nnukwu akwa Chalkboards
Nnukwu kọlọ maka mgbidi
Ihe nlekota osisi
Ihe Nkiri Ọgba
Igwe eji eme ngbanwe
Ihe ngbasi Nnukwu akwa Chalkboards Nnukwu kọlọ maka mgbidi Ihe nlekota osisi Ihe Nkiri Ọgba Ihe ndozi nke ogidi Igwe eji eme ngbanwe Igwe nju oyi